Libanona: Akademia, Fambolena ary Asa Fanorenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2019 5:38 GMT
Mampiseho antsika ny fomba fikarakarana Fattush sy Tabboule i Skylark (Fr), izay salady Libaney roa tena tsara tsiro matetika hita rehefa miray latabatra amin'ny vahiny ny Libaney.
Rehefa avy nameo fahafahampo ny lelantsika àry isika, andao indray ho any amin'ny fanontàna sy ny akademia. Nanoratra tao amin'ny Sehatra Fifanakalozankevitry ny Blaogera Libaney mikasika ny ”Fahavaratra Very: karatra paostaly avy any Libanona” i Lazarus , izay boky manambatra teny notsongaina maro, nosoratana nandritra ny adim-pahavaratra tany Libanona, maneho ireo eritreritra sy fihetsehampon'ny olona, Libaney na tsy Libaney, nandritra izany ady izany:
Mijanona ao amin'ny tontolo akademika, manana an'i Ibn Bint Jbeil isika, izay manao antso ho fanohanana ny Fikambanaben'ny Mpianatra Palestiniana ao amin'ny Oniversiten'i San Francisco. Miasa amin'ny fananganana hosodoko an-drindrina ilay Firaisana, izay manome voninahitra an'Itompokolahy Dr. Edward Said sy ny kolontsaina Palestiniana, nekena ho an'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao amin'ny oniversiten'izy ireo.
Zara raha omena ny fiheverana sahaza azy ny fambolena any Libanona. Manasongadina ny fahadisoan'ity politika ity tao anatin'ny sasany tamin'ireo lahatsorany i Abu Ali. Tao anatin'ity lahatsoratra iray ity, hadihadian’ i Abu Ali ny tetik'i Israely tamin'ny fanimbàna ny tambatsela sosialin'i Libanona Atsimo amin'ny fanimbàna ny famboleny izay mampifandray ny olona amin'ny taniny ary omeny tsiny ihany koa ireo governemanta Libaney nifanesy noho ny tsy firaharahiana ny fampandrosoana ireo faritra ambanivohitra sy ny fiadanan'ireo mpamboly kely manerana an'i Libanona.
Ho an'ny olona vaovao amin'ny raharaha ara-politika any Libanona, mety ho zavatra sambany mba nisy teo amin'y tantara Libaney ny zavatra miseho ankehitriny. Manoratra andrana lahatsoratra ara-tantara iray i Marxist From Lebanon, nanomboka tany amin'ny 1840 ka hatramin'ny andro iainantsika, mampiseho ny toa fomba fiverimberenan'ny tantara ary manolotra ny anton'izany:
Farany, tsikerain'i Sean ny fanapahankevitr'i Amerika hametraka ho anaty lisitra mainty ny Jihad al Binaa, orinasa mpanao asa fanorenana izay mifandray amin'ny Hezbollah, ho toy ny fomba hafahafa hangalana namana any Libanona :